တရုတ် စိတ်ကြိုက် လက်ပ်တော့ ကျောပိုးအိတ် 15.6 လက်မ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ထုတ်လုပ်သူ | အိုမာစကာ
2021 OMASKA အရောင်းရဆုံး TSX031 လက်ကားရောင်းချသော ပြိုင်ပွဲဝင်ကျောပိုးအိတ်
ကျောပိုးအိတ် (BackPack) သည် ကျောဘက်ရှိ အိတ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ပစ္စည်းများ ကွဲပြားသည်။ သားရေ၊ ပလပ်စတစ်၊ polyester၊ ပတ္တူ၊ နိုင်လွန်၊ ချည်နှင့် ပိတ်ချောတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အိတ်များသည် ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းကို ဦး ဆောင်သည်။ တစ်ကိုယ်ရည်တစ်ကိုယ်ရည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသောခေတ်တွင်၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း၊ ခေတ်နောက်ပြန်၊ ကာတွန်းစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးသောစတိုင်လ်များသည် ဖက်ရှင်ကျကျလူများ၏လိုအပ်ချက်များကို ကွဲပြားသောရှုထောင့်များမှဖော်ပြရန် ဖက်ရှင်ကျသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ ခရီးဆောင်အိတ်ပုံစံများသည် ရိုးရာလုပ်ငန်းသုံးအိတ်များ၊ ကျောင်းသုံးအိတ်များနှင့် ခရီးဆောင်အိတ်များမှ ခဲတံအိတ်များ၊ အကြွေစေ့အိတ်များနှင့် အိတ်ငယ်များအထိ တိုးချဲ့လာပါသည်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကျောပိုးအိတ်များသည် အများအားဖြင့် ခေတ်ဆန်သည်၊ တက်ကြွပြီး လန်းဆန်းစေသည်။ ချစ်စရာကောင်းပြီး နုပျိုတက်ကြွမှုကို မီးမောင်းထိုးပြနိုင်သော ကျောပိုးအိတ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပုံ3တွင်ရှိသော ဤ retro ကျောပိုးအိတ်။ Retro သည် လူကြိုက်များသောဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီး ကျောပိုးအိတ်အများစုသည် ဤဒြပ်စင်ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဒီလို ကျောပိုးအိတ်မျိုးဟာ ဖက်ရှင်ကျရုံသာမက ဝတ်ရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ အလွတ်သဘောအချိန်တိုင်းအတွက် စွယ်စုံရဝတ်စားဆင်ယင်မှုပုံစံနီးပါးဖြစ်သည်။ ခေတ်ဆန်သော ခြားနားသောအရောင်သည် တစ်ကိုယ်လုံးကို လတ်ဆတ်သောအရသာကို တိုးစေသည်။ ပုံ (၃)၊
ခေါက်ကျောင်းသား ကျောပိုးအိတ် တစ်ချောင်း
အိတ်များအတွက် ကျောင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်များသည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို လိုက်စားရုံသာမက ဖက်ရှင်နှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလည်း ပိုမိုအာရုံစိုက်ကြသည်။ ကျောင်းသားကျောပိုးအိတ် ယေဘုယျအားဖြင့် အပန်းဖြေပုံစံများနှင့် ထပ်နေပါသည်။ ခေတ်ဟောင်းစတိုင် ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာမှုကြောင့် တစ်ချိန်က ကျောပိုးအိတ်များ၏ အခြေခံမော်ဒယ်များသည် လူတို့၏အမြင်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ဤမော်ဒယ်အများစုသည် အရောင်မျိုးစုံကို အခြေခံထားသည်။ သကြားလုံးအရောင်များ၊ ချောင်းအရောင်များနှင့် ပုံနှိပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ကောလိပ်နှင့် ဖက်ရှင်လက္ခဏာများ ပေါင်းစပ်ထားသော ကျောပိုးအိတ်များသည် ကျောင်းသားများ၏ ကောင်းသောမှတ်ချက်များသာမကဘဲ။ ဤကျောပိုးအိတ်များသည် ပညာရေးစတိုင်၏ ဆန်းသစ်မှုကို ဖော်ပြရုံသာမကဘဲ တက်ကြွမှုနှင့် တောင့်တင်းမှုလည်း အပြည့်ရှိသည်။ ၎င်း၏ပုံမှန်စတိုင်နှင့်ရောင်စုံအရောင်များကြောင့်၎င်းသည်ကျောင်းသားများ၏ငွီးငှေ့နေသောကျောင်းဝတ်စုံများနှင့်သာမန်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအဝတ်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
အများစု ခရီးသွားကျောပိုးအိတ်ပခုံးကြိုးများ၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှု၊ နောက်ကျော၏ အသက်ရှူနိုင်မှုနှင့် ကြီးမားသောစွမ်းရည်တို့ကို အာရုံစိုက်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ယေဘူယျခရီးသွားမော်ဒယ်များသည် အလွန်ကြီးမားသော်လည်း ညာဘက်ရှိ messenger ကျောပိုးအိတ်၏စုံတွဲ ခရီးသွားမော်ဒယ်ကဲ့သို့သော စတိုင်ကျပြီး ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသော မော်ဒယ်များလည်းရှိသည်။ ခေတ်ဆန်သော ခေတ်မီရေပုံးများကို အိတ်ကြီးများနှင့် အသေးများဖြင့် ရနိုင်သော ခေတ်မီပုံစံများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။ စည်ပုံသဏ္ဍာန် ဒီဇိုင်းသည် သာမန်အိတ်အမျိုးအစားထက် အရောင်အသွေး စုံလင်သည်။ တောက်ပသောအရောင်များသည် ခရီးလမ်းအတွက် ကောင်းမွန်သော စိတ်ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အရောင်သန့်သန့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သို့မဟုတ် အားကစားစတိုင် အဝတ်အစားများနှင့် လိုက်ဖက်ရန် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ကွန်ပြူတာများ ၀ယ်လိုအား ပိုများလာသည်နှင့်အမျှ ရုံးဝန်ထမ်းများသည် ဖိုင်အမျိုးမျိုးနှင့် ကွန်ပျူတာများကို ကိုင်ဆောင်နိုင်သော ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံး လိုအပ်လာသည်။ လက်ရာမြောက်သော ရှပ်အင်္ကျီများနှင့် ဘောင်းဘီရှည်များသည် ရုံးဝန်ထမ်းများအတွက် အသုံးများသောအဝတ်အစားများဖြစ်ပြီး သာမန်ကျောပိုးအိတ်များသည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်ကို မီးမောင်းထိုးပြရန် မလုံလောက်ပါ။ A ကောင်းဆုံးစီးပွားရေးကျောပိုးအိတ် ခန္ဓာကိုယ်၏ စိတ်နေစိတ်ထားကိုသာမက စည်းစနစ်ကျသောအိတ်အတွင်း ပုံစံအသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ရန် ဘက်စုံသုံးအပိုင်းများကိုပါ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ယေဘူယျစီးပွားရေးမော်ဒယ်များသည် အတော်လေးခက်ခဲပြီး သုံးဖက်မြင်၊ လျောက်ပတ်သောရှပ်အင်္ကျီပါရှိပြီး၊ စီးပွားရေးသမားများ၏ ဖြောင့်တန်းသောအသွင်အပြင်ကို ကောင်းစွာသတ်မှတ်နိုင်သည်။
တစ်ယောက်တည်း အပြင်သွားတဲ့အခါ 25-35 လီတာလောက်ရှိတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အားလပ်ရက်တွေမှာ မိသားစုနဲ့ ကလေးတွေကို အပြင်ထွက်တဲ့အခါ မိသားစုကို စောင့်ရှောက်တဲ့အမြင်ကနေကြည့်ရင် လီတာ ၄၀ လောက်ရှိတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပြီး မိသားစုဝင်တွေကို ထီး၊ ကင်မရာတွေ၊ အစားအသောက်နဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေကို သယ်ဆောင်ရာမှာ ကူညီပေးမယ့် ပြင်ပစနစ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
ကျား၊မ အလိုက် ခေါက်ပါ။
ကွဲပြားသော ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကြောင့် အပြင်ဘက် ကျောပိုးအိတ်ရွေးချယ်မှုမှာလည်း ကွဲပြားပါသည်။ တစ်ရက် သို့မဟုတ် နှစ်ရက်တာ ခရီးတိုအတွက် လီတာ 30 ခန့်ရှိသော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံး လုံလောက်ပါသည်။ ခရီးဝေး ခရီးများ သို့မဟုတ် ၂ ရက်မှ ၃ ရက်ထက်ပို၍ စခန်းချခြင်းအတွက်၊ ၄၅ လီတာမှ ၇၀ လီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ကြီးသော ကျောပိုးအိတ်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ အမျိုးသားများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၅၅ လီတာခန့်ရှိသော ကျောပိုးအိတ်ကို ရွေးချယ်ကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် ၄၅ လီတာရှိသော ကျောပိုးအိတ်ကို ရွေးချယ်ကြသည်။
တစ်ရက်တာ အသွားအပြန် ခရီးထွက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် တောင်တက်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုများအတွက် 30 လီတာအောက် ကျောပိုးအိတ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ နှစ်ရက်မှ သုံးရက်အထိ စခန်းချရန်အတွက် 30-40 လီတာရှိသော ဘက်စုံသုံး ကျောပိုးအိတ်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ လေးရက်ထက်ပို၍ တောင်တက်ရန်အတွက် ရွက်ဖျင်တဲများ၊ အိပ်အိတ်များနှင့် အစိုဓာတ်ခံဖျာများကဲ့သို့သော ပြင်ပကိရိယာများ ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ 45 လီတာနှင့်အထက်ရှိသော ကျောပိုးအိတ်ကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ယေဘူယျကွင်းလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အသုံးပြုသောကျောပိုးအိတ်များသည် မြင့်မားသောတောင်များကိုတက်သည့်အခါအသုံးပြုသည့်ကျောပိုးအိတ်များနှင့်ကွဲပြားသည်။ တောင်တက်ဖို့သုံးတဲ့ ကျောပိုးအိတ်တွေမှာ အစိတ်အပိုင်းအများကြီး မပါပါဘူး။ တောင်တက်ရတာ ဝါသနာပါသူတွေ သတိထားသင့်ပါတယ်။
ကျောပိုးအိတ်ကို မရွေးချယ်မီ၊ ဆိုလိုတာက သားအိမ်ခေါင်း ကျောရိုးအချွန်ကနေ နောက်ဆုံး ခါးကျောရိုးအထိ အကွာအဝေးကို သင့်နောက်ကျောအပေါ်ပိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရှည်ကို အရင်ဆုံး တိုင်းတာဖို့ လိုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အရှည် 45 စင်တီမီတာထက်နည်းရင် အိတ်သေးလေးဝယ်သင့်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အရှည် 45-52 စင်တီမီတာကြားရှိလျှင် အလတ်စားအိတ်ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည် 52 စင်တီမီတာထက် ပိုရှည်ပါက အိတ်ကြီးတစ်လုံးကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
စခန်းချချိန်အတွင်း ကြွက်ကဲ့သို့သော တိရစ္ဆာန်ငယ်များ အစာခိုးယူခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကျောပိုးအိတ်ကို ပိတ်ထားသင့်သည်။ ညဘက်တွင် ကျောပိုးအိတ်ကိုဖုံးရန် ကျောပိုးအိတ်အဖုံးကို အသုံးပြုရပါမည်။ ရာသီဥတုကောင်းနေရင်တောင် ကျောပိုးအိတ်ကို နှင်းတွေက စိုစွတ်နေလိမ့်မယ်။ နှင်းရာသီတွင် ကျောပိုးအိတ်ကို နှင်းတွင်းတံခါးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ တောအုပ် သို့မဟုတ် ချုံပုတ်များတွင် တွားတတ်ပါက ကျောပိုးအိတ်ကို တင်ကာ ဆွဲငင်အား၏ဗဟိုကို လျှော့ချရန် ပိုသင့်တော်ပါသည်။ စခန်းချရန်အတွက် ကျောပိုးအိတ်အလွတ်ကို ခြေထောက်အောက်တွင် ထားကာ အိပ်အိတ်အပြင်ဘက်တွင် ထားနိုင်သည်။ အိပ်စက်ခြင်း အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ရန် ၎င်းကို အေးသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကာရံထားပါ။ ကျောပိုးအိတ်ကို သန့်ရှင်းပါ။
ညစ်ပတ်လွန်းပါက ကျောပိုးအိတ်ကို ဘက်မလိုက် ဆပ်ပြာဖြင့် သန့်စင်ပြီး လေအခြောက်ခံရန် အေးသောနေရာတွင် ထားသော်လည်း ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် နိုင်လွန်အထည်များကို ပျက်စီးစေသောကြောင့် အကြာကြီး ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ တောင်တက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အခြေခံထိန်းသိမ်းမှုအား ဂရုပြုသင့်သည်။ အထူသော အပ်ချည်ကို ကုလားထိုင်ကူရှင်ကို ချုပ်ရန် အထူးအသုံးပြုထားပြီး ခိုင်ခံ့စွာ ချုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်လွန်ချည်ကို မီးဖြင့် ကျိုးသွားနိုင်သည်။ သီးခြားနည်းလမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. ရေပေါ်ဖုန်မှုန့်များသာရှိသော ကျောပိုးအိတ်များအတွက် သင့်လျော်သော ရေပေါ်မြေဆီလွှာကို သန့်စင်ရန် သေးငယ်သော စုတ်တံကို အသုံးပြုပါ။
2. ရေစိမ်ထားသော ပျော့ပျောင်းသော မျက်နှာသုတ်ပုဝါဖြင့် သုတ်ပြီးနောက် အခြောက်ခံကာ သာမန်အစွန်းအထင်းရှိသော ကျောပိုးအိတ်များ (ရွှံ့ကဲ့သို့သော) အိတ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။
3. ဇလုံကြီးတစ်ခုထဲတွင် ရက်အနည်းငယ်စိမ်ထားပြီးမှ ထပ်ခါထပ်ခါ ရေဆေးချပါ။ ညစ်ပတ်သောကျောပိုးအိတ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။
4. သယ်ဆောင်သည့်စနစ်ကို ဖယ်ရှားပြီး သန့်ရှင်းမှု ပျင်းသူများအတွက် သင့်လျော်သော အဝတ်လျှော်စက်ကို အသုံးပြုပါ။
အေးမြခြောက်သွေ့သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ကျောပိုးအိတ်၏ အပြင်ဘက်အလွှာ၏ ရေစိုခံအလွှာ၏ မှိုပျက်စီးမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ခါးပတ်၊ ပခုံးသိုင်းကြိုး၊ နှင့် သယ်ဆောင်သည့်စနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို စစ်ဆေးပြီး gasket ယိုယွင်းမှု သို့မဟုတ် မာကျောမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဇစ်ကို အစားထိုးရမည်။ ၊ အဲဒါတွေကို ကုစားဖို့ ကျောပိုးအိတ်ထဲက အရာတွေ ချော်သွားတဲ့အထိ မစောင့်ပါနဲ့။
ထုတ်ကုန်အာမခံချက်- 1 နှစ်
ယခင်- 2021 OMASKA FASHION ယှဉ်ပြိုင်မှု TSX9359 အရည်အသွေးကောင်း လက်လီလက်ကား ကျောပိုးအိတ်
နောက်တစ်ခု: 2019 ပုံစံသစ် လက်ကားသေတ္တာများ - China 2019 ရေစိုခံ 17" ဖက်ရှင်စိတ်ကြိုက်လိုဂို ချည်ထိုး usb အားသွင်းကျောင်း လက်တော့အိတ်များ - Omaska
OMASKA လိုဂိုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ OEM SKA0313PCs နောက်ကျောသတ်မှတ်ပါ...
OMASKA အမှတ်တံဆိပ်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ OEM SKA0313PCS ကျောပိုးအိတ် စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက် လက်ကားရောင်းချခြင်း အရည်အသွေးကောင်း တရုတ်ကျောပိုးအိတ် ရှေ့နောက်ဘောင် အတွင်းပိုင်းပြသထားသော Micro side Side3in 1 set ကျောပိုးအိတ် ကုန်သွယ်မှု စည်းကမ်းချက်များ အသုံးပြုမှု ခရီးသွား/လက်ပ်တော့/နေ့စဉ်/လုပ်ငန်းသုံး ကုန်ပစ္စည်းထုပ် (12PP အိတ်+) ) စိတ်ကြိုက်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက် EXW၊ FOB၊ CNF၊ CIF၊ DDU၊ စသည်တို့ကို ငွေပေးချေမှုစည်းမျဥ်းများ T/T၊ Western Union၊ L/C ဆိပ်ကမ်း TIANJIN၊ CHINA တင်ပို့မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပင်လယ်/လေ/မြေ/နမူနာပို့ဆောင်ချိန် 1. ဘုံဗ...
အရည်အသွေးမြင့် OMASAK ကျောပိုးအိတ် 15.6 လက်မ...
ကုန်သွယ်မှု စည်းကမ်းချက်များ အသုံးပြုမှု ခရီးသွား/လက်ပ်တော့/နေ့စဉ်/လုပ်ငန်းသုံး ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်း (1)PP အိတ်+ကတ်တွန်(2) စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ကာလ EXW၊ FOB၊ CNF၊ CIF၊ DDU စသည်ဖြင့် ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ T/T၊ Western Union၊ L/C TIANJIN, China ဆိပ်ကမ်းကို သယ်ဆောင်ခြင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပင်လယ်/လေ/မြေ/အမြန် နမူနာပို့ဆောင်ချိန် 1.common ကျောပိုးအိတ်များ: 3-9 ရက် ထုတ်လုပ်မှု ပို့ဆောင်ချိန် 500-1000 : 20-25 ရက် 1K-5K: 25-35 ရက် 5K-30K : 35-45 ရက် 2.complicated backpacks : 9-14days > 30K : 45 ရက်ကျော် ရှုပ်ထွေးသော ကျောပိုးအိတ်များ : ဆွေးနွေးမည်...
Omaska ​​စိတ်ကြိုက်လိုဂိုကောလိပ်ကျောင်းအိတ် 15 လက်မ t...
ကျောင်းကျောပိုးအိတ်တစ်လုံး၏ ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။ 2018 Backpack Index အရ စာသင်ခန်းထောက်ပံ့မှုနှင့် အခကြေးငွေ ကုန်ကျစရိတ်များကို ခြေရာခံသည့် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ကလေးတစ်ဦး ကျောင်းပြန်တက်ရန်အတွက် ၀တ်ဆင်ခြင်းစရိတ်သည် ယခုနှစ်တွင် အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားသည်။ လေ့လာမှုအရ မိဘများသည် မူလတန်းကျောင်းသားများအတွက် $637 ၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားများအတွက် $941 နှင့် အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက် $1,355 ၊ Products Description Product Name ပျမ်းမျှအားဖြင့် $1,355 ပေးရမည်ဟု မျှော်လင့်နိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကြီးမားသောစွမ်းရည် 17 လက်မ ကျောင်းလွယ်အိတ် Mochilas escolares de gran capacidad de 17 pulgada...
OMASKA 2021 စက်ရုံမှ လက်ကား TSX016 စိတ်ကြိုက်
OMASKA 2021 စက်ရုံမှ လက်ကားရောင်းချသော TSX016 ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအသစ် 15.6 လက်မ oxford အပန်းဖြေကျောပိုးအိတ် OMMASKA 2021 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် နောက်ဆုံးထွက် အပန်းဖြေကျောပိုးအိတ်၊ ၎င်းသည် OMASKA အမှတ်တံဆိပ်၊ OMASKA ခရီးဆောင်အိတ်နှင့် ကျောပိုးအိတ်စက်ရုံ TSX016 ကျောင်းကျောပိုးအိတ်၏ နောက်ဆုံးပေါ် ကျောပိုးအိတ်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ကျောပိုးအိတ်အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရအောင်။ OMASKA 2021 စက်ရုံမှ လက်ကားရောင်းချသော TSX016 ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအသစ် 15.6 လက်မ oxford အပန်းဖြေ ကျောပိုးအိတ်သည် သင့်အား အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ခရီးသွားခြင်းကို ပျော်ရွှင်စေရန် ကူညီပေးသည် သင်သိသည့်အတိုင်း CoronA ဗိုင်းရပ်စ်သည် ...
OMASKA 2021 အရောင်းရဆုံး TSX1803 ယှဉ်ပြိုင်မှု...
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်သောအရောင်- အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင် ပစ္စည်းနံပါတ်- TSX1803# အရွယ်အစားများ: 28x12x41CM NW: 0.56KGS GW: 0.58 KGS ဌာန- unisex-အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Logo: Omaska ​​သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လိုဂို MOQ 600 pcs ရောင်းအားအကောင်းဆုံး အဆင့် TSX1803# အာမခံချက် 1 နှစ် OMASKA 2021 အရောင်းရဆုံး TSX1803 အပြိုင်အဆိုင် ကျောင်းသုံး လက်တော့ပ်ကျောပိုးအိတ်
2021 OMASKA ဒီဇိုင်းအသစ် လက်ကားရောင်းချ OEM ODM မြင့်မားသော Q...
ထုတ်ကုန်အချက်အလက် ရရှိနိုင်သောအရောင်- အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင် ပစ္စည်းနံပါတ်- TSX079# အရွယ်အစားများ: 30x16x43CM NW: 0.52 KGS GW: 0.54 KGS ဌာန- unisex-အရွယ်ရောက်ပြီးသူ Logo: Omaska ​​သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လိုဂို MOQ 600 pcs Best Sellers Rank TSX079# အာမခံနှင့် ပံ့ပိုးမှု- ထုတ်ကုန် 1 နှစ် 2021 OMASKA ဒီဇိုင်းအသစ် လက်ကားရောင်းချ OEM ODM အရည်အသွေးမြင့် TSX079 ကျောင်းကျောပိုးအိတ်
2021 OMASKA FASHION ယှဉ်ပြိုင်မှု TSX9359 ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Qu...
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် ရရှိနိုင်သောအရောင်- အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အနီရောင်၊ အပြာရောင်၊ အစိမ်း၊ အဝါ၊ ခါကီ ပစ္စည်းနံပါတ်- TSX9359# အရွယ်အစားများ: 28x14x44CM NW: 0.58 KGS GW: 0.60 KGS ဌာန: unisex-အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ Logo: Omaska ​​သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လိုဂို အကောင်းဆုံး MOQ 600 pcs ရောင်းချသူများ အဆင့် TSX9359# အာမခံနှင့် ပံ့ပိုးမှု ကုန်ပစ္စည်းအာမခံ- 1 နှစ် 2021 OMASKA FASHION ယှဉ်ပြိုင်မှု TSX9359 အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော လက်လီလက်ကား ကျောပိုးအိတ်
OMASKA စိတ်တိုင်းကျ လက်ကား ဒီဇိုင်းသစ် အရောင်းအ၀ယ်...
ထုတ်ကုန်အချက်အလက် ရရှိနိုင်သောအရောင်- အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင် ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား 33*15*48CM ပစ္စည်းအလေးချိန် 0.58 KGS စုစုပေါင်းအလေးချိန် 0.68 KGS ဌာန unisex-adult Logo Omaska ​​သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်လိုဂို မော်ဒယ်နံပါတ် 1926# MOQ 600 PCS အရောင်းရဆုံးအဆင့် 1805#, 1817#၊ #, 8774#, 023#,1901# Warranty & Support Product Warranty: 1 year OMASKA Custom Wholesale New Design Hot seller cheap 1680D Nylon Men Women Black Business Travelling Laptop Back Pack School Bag Backpack Bag